टिनको छानो (कथा) – Chitwan Post
टिनको छानो (कथा)
कोमलीलाई आज पनि बलेलाई देख्दा आफ्नो बाउको साथी होइन अपराधी देखेको भान हुन्छ, जसको अनुहारलाई ऊ सम्झन चाहन्न । तर घरीघरी देखा पर्ने उसको अनुहारले अतीतको सम्झनाले घोच्न थाल्छ उसको मुटु र एकदिनको कालो छायाको यादले अझै दुख्न थाल्छ । जतिबेला कोइली दसौँ वर्षको खुड्किलोमा उक्लेकी मात्र थिई, जन्मेका पाँच जना केटाकेटी मरेपछि बल्ल कोमली बाँचेकी थिई, त्यसपछि परिवारमा उसको भाइ जन्मेको थियो ।
गरिबीको रेखामा बाँचेको उनीहरुको परिवार सानो झुपडीमै अटाएको थियो । छ््वालीको छानो लगाएको झुपडी बर्सातको समयमा त छ्वालीको छानोले पानी थेग्न नसक्दा घरभित्रै पोखरी बन्थ्यो । त्यसदिन झुपडीको छ्वाली मिल्काएर टिनको छाना लगाउने तयारी हुँदै थियो घरमा । बले र कोमलीका बुबा सँगैका दौँतरी, दुवै गाउँघरमा डकर्मी, काम गर्न पनि सँगै हिँड्थे । त्यसदिन बलेलाई पनि घरमा टिनको छाना राख्ने काममा सहयोग गर्न कोमलीको बुबाले डाकेका थिए । बले हेर्दा निकै मोटो, खाइलाग्दो शरीर परेको, नामजत्तिकै बलियो थियो । त्यसैले होला, सबैले गाउँमा उसलाई बलवान् बले भन्दै जिस्काउँथे । पाखुरा बलियो देखेर नै होला, काम गर्न गाउँमा बलेको धेरै माग हुन्थ्यो ।
माघ महिनाको जाडो दिन उनको बुबा र बले छानामा टिन मिलाउँदै थिए । टिनलाई अड्याउने किलाकाँटा अपुग भएपछि कोमलीको बुबा बजारतिर लागे । किलाकाँटाको अभावले बले बसिरह्यो विनाकाम । कोमली, बले काकालाई खाजा देऊ त– आमाले कोमलीलाई आदेश दिइन् । बाहिर आँगनमा छ्वालीले बस्ने ठाउँ नभएर बले काका खाजा खान भित्र भान्सामै पसे ।
भान्सा अल्लि अँध्यारो कुनामा थियो । अघिपछिभन्दा त्यसदिन खाजामा अल्लि मीठो परिकार बनेको थियो घरमा । उसिनेको चामलको भात, उसिनेर नै फ्राई गरेको आलुको तरकारी, तिल मिसाएर बनाइएको टमाटरको चटनी, लतक्क जमेको दही । पहिलोपल्ट होला कोमलीले भान्सामा यति मिठास भएको परिकार देखेकी । सायद्, घरमा छ्वाली फालेर टिनको छानो राखेको खुसीयालीमा होला मीठो परिकार बनेको– कोमलीको कोमल मनले भन्यो । आमालाई छ्वाली तह लगाउन भ्याइनभ्याइ थियो । बाँचुञ्जेल सबैथोक चाहिने भन्दै आमा छ्वाली मिलाउनै व्यस्त थिइन् । त्यसमाथि, पानी पर्लाजस्तो गरेर आकास मडारिन थालेपछि आमालाई झन् काम सक्ने हतारो बढेको थियो ।
थालभरि भात, आलुको तरकारी, चटनी र कचौरामा दही राखेर कोमलीले खाजा बलेको अघिल्तिर राखिदिई । बले स्वाद लिई खाजा खाँदै थियो हतारले, खाजाको स्वादसँगै कोमलीको फक्रन थालेको बैँस देख्दा मुख रसाउन थालेको बलेले अँध्यारो कुना र व्यस्तताको फाइदा उठाउँदै भुँइ सफा गरिरहेकी कोमलीको कोमलतामाथि जाइलाग्यो । त्यसै त अँध्यारो कुना, ढाडे बिरालोले बिरालीका बच्चा च्याप्प समातेर ढाडे बिरालो कुनो पसेझैँ कोमलीलाई च्याप्प समातेर कुनो पस्यो ऊ । कोमली कत्री नै भएकी थिई र ? ऊ त बलेको हत्केलामा हराउँथी । ढाडे बिरालोको अघिल्तिर बिरालाका बच्चाहरुको होस हराएझैँ कोमलीको होस पनि कता हरायो कुन्नि ? उसले आफ्नो सारा संसार नै अँध्यारो देख्न थाली ।
बलेको आफ्ना छिप्पिएका अङ्गहरु, कोमलीको कोमलताको स्वाद पाउन आतुर भई सलबलाएका अङ्गहरुले कोमलीलाई कताकता स्पर्श ग¥यो, कोमलीमा डर भरिएर आवाज बन्द भयो । आफ्नो आमाले मायाले हातले सुमसुम्याउँदासमेत शरीरमा काउकुती लागेको महसुस गर्ने कोमलीले फलामजस्ता बलेको हातको स्पर्शलाई कसरी सामना गरी होला ? कति बेला तृप्तिको महसुस गरी बलेले चटक्क छाड्यो कुन्नि, कोमली कुनामा लडिरहेकी थिई निरीह भएर ।
सन्तुष्टिको अनुभूति र भयको रेखा एकैसाथ अनुहारमा खेलाउँदै उसले भन्यो– तेरो बाउआमालाई भनिस् भने…। कोमलीको कलिलो मस्तिष्कले उसको धम्कीको भाषा बुझेर हो वा लाजले हो, कोमलीले आफ्नो कोमलतामाथि भएको आक्रमण उजागर गर्नै सकिन । बले डकार्दै बाहिर निस्क्यो । भाउजू, खाजा असाध्यै मीठो बनाउनु भाको रै’छ, साह्रै मीठोसँग खाइयो नि– उसले खाजाको तारिफ ग¥यो आमासँग । के थाहा, कामको व्यस्तता र सीधा रेखामात्रै बुझेकी उनलाई उसको डकारबाट खाजाको स्वादमात्रै होइन कोमल छोरीको अङ्गमाथिको बज्रपातको गन्ध निस्केको कुरा । भोक र भोग दुवैले टन्न भएर निस्केको बलेको बक्रदृष्टिको के पत्तो आमाको सरल मस्तिष्कलाई ?
बलेको धम्कीले थिचिएको आफ्नो पीडालाई ओकल्नै सकिन कोमलीले । ऊ बिस्तारै कुनाबाट उठी । छिप्पिएको बलेको शरीरले मुसारेका आफ्ना अङ्गहरुको दर्द कति हो कति, उसले लेखाजोखा गर्न सकिन । कलिलो उमेरमै भयावह पीडा सहेर त्यही बलेको जुठा भाँडा उठाउन थाली कोमली । बलेले खाएको जुठो थालभरि ऊ बलेको घृणित अनुहार देख्छे, त्यस थाललाई घृणा गर्छे र आफ्नो शरीर हेर्दै त्यो थालजत्तिकै जुठो भएको महसुस गर्छे । जुठो सफा गर्नु र कसैको जुठो भएर दासी हुनु छोरीको भाग्यमा जन्मसँगै कोरिएर आउँदो रै’छ भन्ने अनुभुति हुन थाल्छ उसको कलिलो मस्तिष्कलाई पनि ।
मन नलाग्दा पनि जुठा भाँडा बोकेर बाहिर निस्कँदा कति ढिला गरेकी कोमली ? चुलाचौकाको धन्दा त चाँडो गर्नुपर्छ छोरीले– आमाले सदियौँदेखि चल्दै आएको चुलाचौकाको लगामको संस्कार सिकाउन भ्याइहालिन् कोमलीलाई । जुठो थाल सफा गरिरहँदा उनका कोमल मनमा अनेकौँ विचारहरु छालजस्तै उर्लिरहेका थिए– एक क्षणअघिको जुठो थाल यति सफा देखियो कि अब चाहेको खण्डमा त्यसलाई अर्को व्यक्तिले पनि प्रयोग गर्न सक्थ्यो । जुठा थालजस्तै फोहोर मस्तिष्क बोकेका पुरूषहरु पनि धोएको थालजत्तिकै सफा देखिन्छन् यो समाजमा, तर एकपल्ट जुठो पारिएका महिलाका शरीर सधैँका लागि लज्जित बनाइन्छ किन ? आखिर जुठो हुनेहरुलाई भन्दा जुठो बनाउनेहरुलाई किन पुजिन्छ यो समाजमा ?
बुबाले बजारबाट अपुग किलाकाँटा ल्याएपछि हतार–हतार किलाकाँटा ठोक्दै टिन अड्याउन थाले । जाडो मौसम त्यसमाथि पानी पर्ने संकेत गर्दै काला बादल मडारिन थालेर होला बुबालाई खाजा खाने हतारो भन्दा टिन मिलाउने चटारो थियो । जति किलाकाँटा ठोकेको आवाज सुनिन्छ कोमलीको मनले भन्थ्यो– त्यो किलाकाँटाले टिनलाई होइन आफ्नो मुटुभित्र कहिल्यै निको नहुने भ्वाङ पार्दैछ । बर्सातको पानी घरभित्र पसेर ताल बन्ने पीडा टिनको छानोले अन्त्य गराउने भो भन्ने खुसीयालीमा त्यसदिन कोमलीका बुबाआमा निकै खुसी भए ।
भाइ पनि टिनको छानो देख्दा मख्ख प¥यो । टिनको छानो हाल्न सक्नु गरिबीले पोलेको उनीहरुको झुपडीका लागि महल खडा गरेजत्तिकै थियो, संसार नै जितेजस्तै थियो तर कोमलीलाई भने किन किन त्यो टिनको छानोसँग कुनै खुसी छैन, आफूले संसार हारेको भान हुन्थ्यो । टिनको छानो हेर्दा बन्ने उनको पीडाको तलाउ बुझ्ने कसले ? पीडालाई कम गर्न मनको तनाव भत्काऊँ भने त्यो पीडा देख्ने र विश्वास गर्ने कसले ? यदि विश्वास नै गरिहाले भने पनि समाजको अघिल्तिर मुख खोल्ने आँट कसको पुग्थ्यो र ? त्यसमाथि पनि बलिया पाखुरीहरुले उचालेको समाजमा निर्धाहरुको न्याय त मरूभूमिमा खन्याइएका पानीजस्तो बेकम्मा हुन्थे ।
झुपडीमा खुसी थोपरेको टिनको छानो र बलेले जुठो हालेको भान्छाको त्यो थाल ती दुवै चीजसँग कोमली यति धेरै घृणा गर्छे कि त्यति त ऊ दुर्गन्ध बोकेर बग्ने नालीलाई पनि घृणा गर्दिन होला ! त्यो थाल जसलाई उसका कोमल हातले स्पर्श गर्न मन गर्दैन, कुनै बेला त्यही थालमा खानेकुराको भाग परे कोमली त्यो खानेकुरा नै मिल्काइदिन्छे । भान्छा कोठाको कुनालाई देख्दा उसको जीउभरि डर र घृणाका काँडाहरु एकसाथ उम्रन्थे ।
कोमलीलाई हिजोआज न त भान्छामा पस्न मन पर्छ, न त केही खान नै मन लाग्छ । बलेले जुठो हालेको थालसँग उसलाई यति घृणा थियो कि एकपल्ट सफा गर्ने बहानामा भुइँमा खसालेर थाल नै नराम्रोसँग कुच्चाइदिई । त्यो पल उसलाई त्यो कुच्चिएको थाल देख्दा निकै खुसी मिलेको थियो । ऊ सोच्थी– यो थालजस्तै अपराघी बलेको अनुहार पनि कुच्चियो होला ? थालजस्तै कुरुप उसको अनुहार देख्दा समाजले निकै घृणा गर्छ होला ? बिचरी, उसको बाल मस्तिष्कमा कति घृणाका बीउहरु उम्रेका छन्, जसलाई उजागर गर्न नसम्दा ऊ निर्दोष त्यो थालसँग बदला लिएर मनलाई सन्तुष्टि मिलेको र न्याय पाएको अनुभूति गर्दछे ।
कति दुःखले किनेको थाल पनि भुइँमा खसालेर कुच्चाइदिई भनेर आमाले साह्रै दुःख मान्दै कोमलीलाई गाली गरिन् । त्यो थाल किन्न कतिदिन पाखुरा दुख्ने गरेर मेलापात गर्नु परेको थियो उनले, त्यहि भएर होला आफ्नो अमूल्य पसिना बगाएर जोडेको सम्पत्ति थाल बिग्रियो भनेर आमालाई चिन्ता लाग्यो । चिन्ता लाग्नु पनि स्वाभाविक थियो आमालाई, जुन थाल उनको मेहनतको कमाइ थियो त्यसमा उनको पसिनाको मूल्य पोखिएको थियो । तर, के थाहा उनलाई त्यो थाल बिग्रिँदाको खुसी र नबिग्रिँदाको चिन्ता कोमलीको मनको ? त्यही किचिएर बिरुप भएको थाल पनि आमाले साटेर अर्को भाँडा लिन हुन्छ भन्दै सुरक्षितसँग राखिन् । त्यो थाल र भान्छा कोठाको कुनो दुवै कोमलीलाई हेर्न मन छैन । आमाले त्यो थाल सुरक्षित राख्नु भनेको बलेभित्रको नीच व्यवहार संरक्षित हुनु हो, कोमलीको मनले भन्छ तर कोमलीकी आमा यी सबै कुराबाट अनभिज्ञ नै छिन् । कोमली खान पनि मन गर्दिन, बेलाबेलामा टोलाइरहन्छे, दुब्लाएर सिक्कोजस्तो भइसकी । आजभोलि काममा पनि खासै मन लाउँदिन । अस्ति भान्छामा थाल खसालेर बेस्सरी कुच्चाइछ, के भयो होला हाम्रो छोरीलाई कोमलीका बा ? भन्दै आमाले ठूलो चिन्ता गरिन् । आमाबुबाको मन न हो, सन्तानको दुःखमा नराम्रो मान्नु स्वाभाविक नै हो ।
एकपल्ट पारि गाउँमा धामीकहाँ लगेर झारफुक गरौँ न त, कतै टुनामुना लागेको पो हो कि ? बुबाले आमालाई सल्लाह दिएबमोजिम आमाले कोमलीलाई धामीकहाँ पु¥याइहालिन् । धामीले उनको नाउँमा एउटा कुखुराको भाले काट्न लगाइहाल्यो । कोमलीको स्वास्थ्य राम्रो हुने आशमा धामी ले भनेझै उपचार गरेर अभिभावक हुनुको कर्तव्य त पूरा गरे, तर वास्तविकता उनीहरुले अझै बुझ्न सकेका थिएनन् । कोमलीको मनको व्यथा अर्के छ, जसलाई धामीको उपचारले छुन सक्तैन र कोमली चाहेर पनि आफ्नो व्यथा बताउन सक्दिन । आमाबुबा धामीको विश्वास गर्दै कोमलीको व्यथा निको हुने आशमा ढुक्क छन् । व्यथा एउटा उपचार प्रविधि अर्कै, के निको होला र उनको व्यथा ? कलिलो शरीरमा एउटा कहालीलाग्दो व्यवहार पचाउन विवश थिई कोमली । पीडालाई नपचाएर के गरोस् कोमलीले, जसको आवाज सुन्ने समाज नै बहिरो छ । जब कि, आफू जन्मेको झुपडी र आमाबुबाको काख नै उसको पीडाबाट यति अनभिज्ञ छ कि उनीहरुको दिमागले समाजमा यस्ता घिनलाग्दा मान्छे पनि हुन्छन् भनेर गहिरिएर सोच्न सक्दैन । आफूजस्तै सरल र इमानदार देख्छ, उनीहरुको आँखाले संसार पनि ।
समय बित्दै गयो । कोमलीले आफ्नो पीडा मनभित्रै दबाएर राखिरही । बढ्दो उमेरसँगै उसका शरीरका अङ्गप्रत्यङ्गहरु फस्टाए, रस भरिएर सुन्दर बनेको पूmलजस्ती राम्री हुँदै गई कोमली । तर, किन हो कुन्नि उसलाई आफ्नै रुपको सुन्दरता पनि बोझ लाग्न थाल्यो । बैँसतिर उकालो लाग्दा जुन प्रकारका उत्तेजनाहरु मनमा पलाउनुपर्ने हो त्यस्ता उत्तेजनाहरु कोमलीको मनमा कहिल्यै पलाएन । सायद्, राम्रोसँग नफस्टाउँदै बैँसका मुनाहरु कलिलैमा लुटिएर होला !
छोरी ठूली हुँदै जाँदा घरको काममा सहयोग गर्ली भनेर आमाबुबाले धेरै आशा गर्छन् । घरको काम गर्नु छोरीको प्रमुख काम सम्झेर हो वा घरेलु कामको सीपमा पोख्त बनाउने उद्देश्यले हो, सानैदेखि आमाले कोमलीलाई घरधन्दाको सीप सिकाउँथिन् । आमाले प्रायः कोमलीलाई मकै, कोदो पिस्न घट्ट पठाउँथिन्, घटेरो भनाउँदो जगे कोमलीको बैँसमा नजर हाल्दै आफ्ना उत्तेजित हातहरु उसका कोमल अङ्गहरुमा घुसार्ने कोसिस गरिरहन्थ्यो । कोमलीलाई उसको व्यवहार पटक्कै मन पर्दैन । तर पनि प्रतिकारस्वरुप गाली गर्ने साहस उसमा भरिएको थिएन त्यतिबेला ।
कोमलीको बालपनमा रमाएर नाच्नुपर्ने समय बले र जगेजस्ता समाजका भमराहरुको यातना सहँदैमा बिते । बालपन त आयो उसको जीवनमा तर वास्तविक बालपनको आनन्द कोमलीले आफ्नो जीवनमा कहिल्यै महसुस गर्न पाइन । बालपनको मज्जा लिन नपाई कोमली बैँसको आँगनमा पाइला राख्ने भइसकेकी थिई । आफ्ना बुबाका दौँतरी भन्न पनि लाज लाग्ने बले र सरलपनको फाइदा उठाएर कलिला मुना निमोठ्ने अवसरको खोजीमा तल्लीन जगेलाई देख्दा कोमलीलाई संसारका सबैभन्दा खराब व्यक्ति तिनीहरु नै हुन् भन्ने भान हुन्थ्यो ।
अथाह पीडा बोकेर गाउँमै जसोतसो कोमलीले स्कुले जीवनको शिक्षालाई पूर्णता दिई । रोगले थिलथिलो पारेपछि बुबाले गरिबीको रापमा पिल्सिएर अस्पताल नदेख्दै धामीझाँक्रीको उपचारमा अल्झिएर संसारबाट बिदा लिए । आमा बूढी हुँदै गइन् । भाइ ठूलो हुँदै गयो । शिक्षा र उमेरको परिपक्वताले कोमलीमा पनि आफूमाथिको अन्यायविरूद्ध आवाज उठाउन सक्ने सामथ्र्य बढ्दै गयो । आफू र भाइले घरको काममा सघाउन सक्ने भए पनि घरको आर्थिक अवस्था अझ नाजुक बन्दै थियो, काम गर्ने बुबाको अभावले ।
कोमलीले छात्रवृत्ति पाएर सहरमै बसेर उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने अवसर पाई, जसले कोमलीमा मात्र होइन आमाको पनि खुसीको सीमा नै थिएन । उच्च शिक्षाको दैलो टेक्ने अवसरले कोमलीमा थपेको साहस र मेहनत निकै उच्च थियो । बले र जगेलाई बुढ्यौलीले गाल्दै लग्यो, तर पनि कोमलीको मनमा उनीहरुप्रतिको घृणामा एकरत्ति पनि कमी भएन । वृद्धहरुको सम्मान गर्ने संस्कारभन्दा बाहिर रहेर ऊ बले र जगेलाई औधी घृणा गर्छे । उच्च शिक्षाको अवसरलाई पक्रन सहर बस्ने अवसर पाएपछि बले र जगेको अनुहारबाट त कोमलीले मुक्ति पाई, तर उनीहरुले आफूमाथि थुपारेको पीडाको पहाडले अभैm पनि उसको कोमलतामा बिझाउन भने छाडेको थिएन । समय परिवर्तनशील छ, ढिला वा चाँडो समयले भइरहेको परिस्थितिमा परिवर्तन अवश्य ल्याउँछ । गाउँमा पहिलेको तुलनामा शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातको राम्रो व्यवस्था भइसकेको छ । आर्थिक हैसियत दरिलो हुनेहरुले निकै ठूलो महल पनि खडा गरिसकेका छन् । महिलाका लागि आत्मनिर्भर सीप र चेतनाका लहरले गाउँमा निकै फड्को मारिसक्यो ।
कोमलीले सहरमा आपूmले पाएको अवसरको राम्रो सदुपयोग गर्दै सफलताको पथमा अघि बढिरही । बालपनमा पीडाको भारी बोकाउने बले र जगेको अनुहारबाट मुक्ति पाए पनि शिक्षाको खोल ओढेर आधुनिकताको ढोङ देखाउनेहरुको व्यवहारले वाक्क थिई सहरमा कोमली । अशिक्षा र अन्धविश्वासले भरिपूर्ण गाउँमात्रै होइन दुव्र्यवहारको सिकार बनेको सहर पनि यसबाट अछूतो रहेनछ । फरक यतिमात्रै हो, गाउँ शिक्षाको अभावमा यस्ता कुकृत्य गर्न थाल्छ भने सहर आधुनिक सभ्यता देखाउने होडमा यस्ता कुकृत्य देखाउँछ । धेरै शिक्षित सहरिया बले र जगेहरु कहिले राजनीतिज्ञ, कहिले व्यापारी, वकिल, जागिरे कर्मचारी, प्रोफ्रेसर बनेर एउटा नारीको अस्मितामा ¥याल चुहाउन पछि नहटेको देख्दा शिक्षा र चेतनाका सर्टिफिकेट भएरमात्रै हुँदैन, शिक्षा र चेतना त मुटुभित्र लाहाछाप बनेर टाँसिनु पर्दोरै’छ भन्ने बोध हुन्थ्यो कोमलीलाई । शिक्षित र सभ्य वर्गको पगरी लगाएका यिनै राजनीतिज्ञ, शिक्षक, कर्मचारी, कलाकार, व्यवसायी खेलाडीहरुले आफ्नो सफलताको बिन्दु पुग्न हिँडिरहेको शरीरको रससँग क्षणिक मिश्रणको आनन्दमा लिप्त हुन समय मागेको देख्दा कोमलीलाई सभ्यताको खोल ओढेका सहरियाहरुसँग साह्रै घृणा लाग्थ्यो ।
गाउँका बले र जगे तथा सहरिया बले र जगेहरुमा के नै फरक रह्यो र भन्ने भान हुन्थ्यो उसलाई । बस्, फरक यतिमात्र थियो उनीहरुमा कि गाउँका बले र जगेहरु अनुमति नमागी कुनाकाप्चामा लुकेर अस्मितामाथि जाइलाग्थे भने सहरिया बले र जगेहरु एक घन्टा, एकदिन र एकरातका समय माग्दै होटल, लज र रेस्टुरेन्ट बुकिङ गर्ने होडबाजीमा भौँतारिँदै कोमलीको शरीर हेर्दै मख्ख पर्दथे । मागेका सबैलाई समय दिने हो भने कोमलीका लागि एक महिनामा नै तीन सय पैँसट्ठी दिन भए पनि पुग्ने छैन, तर कोमलीमा आफ्नो अस्मितालाई बलि चढाएर आफूले शिखर चुम्ने मनसाय कहिले जागेन ।
सहरिया फरक ढङ्गका बले र जगेहरु सबैलाई लत्याई आफ्नो अधिकारको खोजी र लक्ष्य प्राप्तिमा दगुरिरही कोमली । आधुनिक बले र जगेहरुसँग लड्ने क्षमता आफ्नो पाखुरीमा बोकेर अघि बढेकी कोमलीको सफलताले निकै अग्रता लिँदै थियो, जसबाट गाउँमा आमा र भाइको खुसी पनि उचाइमा पुगेको थियो । छोरी भएकोमा परिवारले गर्व गर्न सक्ने छोरी बन्नु थियो कोमलीलाई, आधुनिक बले र जगेहरुसँग डिस्कोमा लटपटिएर क्षणिक आनन्दमा लिप्त हुने छोरी होइन ।
गाउँ विकासको लहरमा झाँगिँदै थियो । गाउँको स्वरुप बदलिएर आधुनिकतातिर ढल्केको बेला पनि कोमलीको झुपडी आधुनिक महलका रुपमा ठडिन सक्ने औकातमा पुगेको थिएन । त्यही झुपडी पनि भूकम्पको चोटले पूर्णरुपमा भग्नावशेषमा परिणत भयो । भूकम्पले झुपडी ढल्यो । झुपडीसँगै टिनको छानो ढल्यो, त्यसमा कोमलीको आमा र भाइको दुःखको सीमा रहेन । तर किन हो, भूकम्पले ढलेको टिनको छानो देखेर कोमलीको खुसीको सीमा नै रहेन । आफू जन्मेको झुपडीको अगाध माया हुन्छ मान्छेलाई । तर, त्यही झुपडी ढल्दा खुसी बनेकी कोमली भूकम्पलाई आत्मादेखि नै धन्यवाद दिन्छे । जुन झुपडीको टिनको छानोले कहालीलाग्दो विगत सम्झाउँछ, जसका भान्सा कोठा र भाँडाकुँडाले लुटिएका विगतको चित्र मस्तिष्कमा कोर्न थाल्छ, आज त्यही एउटा घिनलाग्दो अतीतसँग जोडिँदै जन्मेको झुपडी भूकम्पले ढाल्दा कोमलीको मन फक्रिएको फूलजस्तै बनेको छ । आफ्नो रगत र पसिना बगाएर जोडेको झुपडी त्यसमाथि पनि आफ्नो लोग्नेले छाडेर गएको चिनो, त्यो भूकम्पले तहसनहस बनाउँदा आमाको आँखा कयौँ दिनसम्म ओभानो रहेन । उनी सोच्थिन्– भूकम्पसँगै मेरो झुपडी ढल्यो, खुसी ढल्यो, रगत र पसिना मुछिएको एउटा बास ढल्यो । तर, बिल्कुल फरक सोचाइ थियो कोमलीको– भूकम्पले झुपडी ढाल्यो, त्यो बलेजस्ता फोहोरी मस्तिष्कले जोडेको टिनको छाना ढल्यो । बलेको जुठो बनेको कुच्चिएको थालको निशाना भग्नावशेषसँगै पुरियो सदाका लागि ।
भूकम्पले गाउँका आधुनिक घरहरुबाहेक पुराना झुपडीहरुको इतिहास सखाप पारेको बेला कोमलीको झुपडीमात्रै होइन कयौँ यस्ता झुपडीहरु तहसनहस भए । झुपडीमात्रै नभएर कयौँ मानवजीवन र पशुलीला पनि खत्तम भयो । भूकम्पको चेपुवामा परेर बले घरभित्र परेर किचियो रे ! उसको लास तीन दिनपछिमात्रै निकाल्न सकियो रे भग्नावशेषबाट भन्ने दुःखद समाचार पनि निकै सुखद बनेर कोमलीको खुसी चुलियो । कुनै बेलाको बलवान् बले, अपराधी बले आज आफ्नै घरले किचिँदा कोमलीको मनको खुसीको उचाइको त के कुरा, नाप्नै नसकिने थियो र आफ्नो बालापनदेखिको बदला पूरा भएको महसुस गर्दथी । आज बलेसँग उसको जुठो परेको कुच्चिएको थाल र टिनको छानो झुपडीको भान्छा कोठा सबैको अन्त्य भयो र आफ्नो अथाह पीडा लुकेका चीजहरुको अत्यन्तै दुःखद अन्त्येष्टि गर्न सहयोग गर्ने महाभूकम्पलाई कोमलीले महान् मान्दै आफ्नो तीतो अतीत झल्काउने सबै चीजको अन्त्येष्टि भएको खुसीयालीमा आँखाबाट आँसु चुहाई ।
जगे पनि रोगले थिलथिलो भएर ओछ्यानमै थला परेर संसार त्याग्यो । बालापनदेखि घृणाको बीउ रोपिएका सारा चीजहरुको अन्त्यले आज कोमलीमा यति धेरै खुसी मिलेको छ कि जुन खुसीको अनुभव जीवनमा कहिल्यै पाएकी थिइन उसले । भूकम्पपछिको राहत र पुनर्निर्माणको कामले तीव्रता पाउन थालेपछि एउटा एनजिओले अस्थायी टहरो बनाइदिएपश्चात् आमा र भाइ अस्थायी टहरोमा बस्न थालेका थिए । सहरको अध्ययनले आफूमा बढाएको आत्मविश्वास, साहस र सीप बोकेर गाउँमा फर्केकी कोमलीले गाउँमा धेरै एनजिओसँग हातेमालो गर्दै धेरैमा सीप, ऊर्जा र आत्मविश्वास भर्ने काम गरी, जसबाट कोमलीको प्रशंसा गर्नेहरु वृद्धि हुँदै गए । कोमलीले बटुलेको सफलता र प्रशंसाले बुढ्यौलीले शिथिल हुँदै गएको आमाको शरीरमा ऊर्जा थपेको थियो । भाइले पनि सीप सिकेर स्वरोजगार हुँदै गएपछि आर्थिक अवस्थाले पनि अल्लि खुड्किलो चढदै जान थाल्यो । भूकम्पले ढालेको टिनको छानो पनि भग्नावशेषबाट झिकेर कबाडीलाई बेचिदिएर कोमलीले टिनको छानोसँग गाँसिएका बलेको धमिलो छायालाई निर्मूल पारिदिई ।
आमाबुवाले रगत र पसिना घोलेर बनाएको झुपडीले भन्दा दुःख देखेर कुनै एनजिओले बनाइदिएको टहरोमा निकै खुसी मिलेको छ कोमलीलाई । थाहा छ, त्यत्तिकै खुसी उनको आमालाई मिलेको छैन किनकि उनको सोझो मस्तिष्कले टिनको छानो र झुपडीसँग जोडिएको कोमलीको दुःखद कथालाई बुझेकै छैन र बुझाउन पनि चाहिन कोमलीले । बालापनमा बले र जगेकै डरले त्यो पीडा आफ्नो मनमा नजरबन्द गरिरही, अब त्यो पीडा उजागार गरेर बुढ्यौलीले गलेकी आमाको मस्तिष्कमा तनाव भर्न चाहन्न कोमली । त्यसैले, टिनको छानोसँगको आफ्नो पीडा आमासँग कहिल्यै व्यक्त गरिन । अस्थायी टहरोलाई एउटा स्थायी घरमा परिणत गर्ने उद्देश्य बोकेर कोमली अघि बढिरही, बुढ्यौलीले गलेकी आमाप्रतिको कर्तव्य र भाइको उज्ज्वल भविष्यको जिम्मेवारीलाई आफ्नो काँधमा बोकेर ।